Ukuqonda kwabathengi kubudala beDijithali | Martech Zone
Ukufumana ingxelo efanelekileyo yabathengi-kunye nokufumana ngokukhawuleza-kubaluleke ngakumbi kunangaphambili kwimpumelelo yeshishini. Ngokuqinisekileyo, ukuzenzela ngokwakho kunzima, abaphandi bophando abaze bathenjiswe, kunye namaxesha okufumana ukuqonda kwabathengi bazive lide kakhulu ukwenza umahluko kwishishini. Kodwa, kukho indlela ebhetele yokufumana ulwazi olufunekayo kubathengi oluqinisekisa imveliso kunye nolwalathiso lweshishini.
Indibaniselwano yetekhnoloji yale mihla ihlanganisene ukwenza okungcono, okukhawulezayo, okungabizi kakhulu kubathengi. Esona sisombululo sisiso sokuqonda kwabathengi esitsha sisebenzisa i-smartphone. Udidi olutsha lweemveliso lubizwa ngokuba zizisombululo ze-Research-as-a-Service (RaaS), kwaye ezona mveliso zingcono zeRaaS zijolise ekupheliseni ukuphazamiseka okwenzeka kwiindlela zemveli zokudala uphando olusemgangathweni. Izisombululo zeRaaS zixhobisa abaphandi, oosomashishini, abaphathi bemveliso, abayili kunye nabathengisi ukuze baphinde bajonge kwezona zinto zibaluleke kakhulu; ukumamela abathengi kunye nethemba, kunye nokudibanisa ukuqonda kwabantu kwi-UX kunye neemephu zendlela yemveliso.
Apho uPhando oluPhuculo lwaphulwe khona
Njengoko uMarc Andreesen edumileyo, "Isoftware iyalidla ihlabathi." Kwaye, akukho mzekelo mkhulu kunenkqubo, izixhobo kunye nomda wexesha wokwakha imveliso. Ixesha le-Lean-Agile ladala ukuqhuma kophuhliso lweemveliso oluqhutywa yidatha kuwo onke amashishini, kunye nezixhobo zokufaka iikhowudi, ukuyila, ukuvavanya, ukuhlalutya kunye nokuhambisa iimveliso-imibhobho yemveliso itshintshe ngokupheleleyo, ngaphandle kokudala ukuqonda kwabantu. Idatha enkulu kunye neArtificial Intelligence ibonakalisile ukuba ithembisa ukunika uphando olusemgangathweni luphelelwe lixesha, kodwa zonke ezo zithembiso azizalisekanga kwaye isidingo sokuqonda kwabantu sisesikhulu, kwaye amaxesha kunye nezixhobo ziphelelwe lixesha kunye nophuhliso lwemveliso yanamhlanje. Kude kube kutshanje, uphando olukumgangatho ofanelekileyo belusenziwa ngendlela efanayo kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, yiyo loo nto ingasasebenzi ngoku:
Iindlela zesiko zokwenza uphando lwabathengi zibiza kakhulu
Amalungiselelo okwenza ukuba ulwazi luqhubeke kunye nexesha elinomda
Ukufuna ukuqonda kwabathengi kumanqanaba ahlukeneyo eR & D kuphazamisa isantya, isantya kwintengiso
Iinkampani zifuna ukufikelela kubathengi bazo ekujoliswe kubo, isondele kakhulu ayibali
Ukuvela kophando olusemgangathweni
Sebenzisa itekhnoloji yokusika ukoyisa imiceli mngeni yamalungiselelo ngokwembali ebambeke kuphando olusemgangathweni, izisombululo zeRaaS zixhobisa abaphandi ukuba baphinde bajonge kwezona zinto zibaluleke kakhulu: ukwenza uphando lwabo kunye nokwenza ulwazi olunokwenza umahluko wokwenyani.
Iindaba ezimnandi zezokuba ukwamkela itekhnoloji entsha yophando esemgangathweni ayisosigqibo sitsha, esiqhelekileyo. Iinkampani ezihamba phambili kumzi-mveliso zisebenzisa iitekhnoloji ezintsha ukunceda ukudala kunye nokungenisa uphando olusemgangathweni kwimveliso nakwintengiso yophuhliso, ngokukhawuleza nangokuphindaphindiweyo. Nantsi imfihlo enkulu: Abathengisi kunye neenkokheli zeshishini kwiinkampani ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi liphela, ezivela kwi-Samsung, i-LG, iVerizon, indawo yoMatshini kunye neHyundai-bakunyaka wabo wesibini opheleleyo wokusebenzisa izixhobo zeRaaS ukuguqula amashishini abo, ukudibana kunye nokudlula Ukulindela abathengi. Izisombululo zeRaaS ngoku ziyinxalenye yolawulo lwemveliso kunye neyona ndlela isebenzayo ye-R & D, enye ibhokisi kwimizobo ye-Growth Stack ebonisa imephu izixhobo ezifanelekileyo kunye neenkqubo zokwenza iimveliso ezintle.
I-methinks ihambisa uPhando-njengeNkonzo
Inkampani esekwe kwiSilicon Valley imethinks sisisombululo esifanelekileyo somgangatho wexesha elizayo. Ukusebenzisa indlela yokuqala yokuhamba ngefowuni kunye nenkqubo yokuprinta enobundlobongela edibanisa nabathengi abaqinisekisiweyo kunye neengcali, unokufumana ukuqonda kwangoko ngesiqwengana-kwisixhenxe, ukuba zichane-zexabiso.
I-methinks yenza impembelelo enkulu kumzi-mveliso we-R & D wezigidi ngezigidi ngokwenza ukuqinisekiswa kwabathengi kube yinkqubo esecaleni, efanelekileyo nesebenzayo ekuziseni phantse nayiphi na imveliso okanye inkonzo kwintengiso. Iindleko, ixesha kunye nolungiselelo azisekho imiqobo ekufumaneni imbonakalo yabathengi. Ngenxa yoko, ukuphindaphinda kokuqhutywa kunye nokusetyenziswa kophando olusemgangathweni kufuneka kunyuse kwaye kutshintshe ezona ndlela zilungileyo kumashishini amaninzi, kwihlabathi liphela.
I-methinks inceda nayiphi na inkampani ekujolise kuyo, ukufumana kunye nodliwanondlebe nabathengi kunye nethemba ngeefowuni zobuso ngobuso. Olu phando lubonisa ukuba umgangatho unceda amashishini ukuba afunde kubathengi bawo ngencoko efanelekileyo, engabizi mali, yokujongana ubuso ngobuso ezimodareyithwayo, ezirekhodweyo, ezibhaliweyo, ezichazayo nezilungiswe ngokulula kwaye zabelwane ngokulula nangokufunda ngokukhawuleza kombutho. Iqonga elisekwe kwi-RaaS livumela abaphandi ukuba baqhube udliwanondlebe, uphononongo olusemgangathweni kunye nezifundo ezide, ezivumela ukuqonda okususela ekusebenzeni kweemveliso ezisisiseko ukuya ekuqondeni okungagungqiyo kokusetyenziswa kwemveliso yobuqu kunokufunyanwa kuphela kwimizamo yexesha elide yophando.
I-methinks ifumene impumelelo kwangoko kwinkonzo yamashishini oshishino lwehlabathi, izisa abathengi baseMelika kwizikhulu zamanye amazwe kubathengi be-elektroniki, iimoto, imidlalo, isoftware kunye nemidiya. Kutshanje, ii-methinks bezisoloko zibandakanyeka kumashishini agxile e-US, ngakumbi lawo akumanqanaba okuqala eR & D. I-methinks ifuna ukutshintsha indlela oluqhutywa ngayo uphando ngokuxhobisa oosomashishini, abaphandi abaqeqeshiweyo, abaphathi bemveliso, abayili okanye nayiphi na inkokheli ye-R & D ukuze ifake ngokukhawuleza nangokonga iindleko ulwazi lwabathengi kwishishini labo. Nawuphi na umsebenzisi we-methinks unokucwangcisa kwaye arekhode udliwanondlebe kwangoko, athathe amanqaku, amanqaku encwadi yabathengi, kunye nokunye. Zonke iividiyo zinexesha lesitampu kwaye zigcinwe efini ukufikelela ngokulula, ukuhlela kunye nokwabelana.
Umahluko ophambili onikezela ngemethinks lichibi labathathi-nxaxheba abagxile kwiscreen. Phantse i-400,000 ihlolwe kwangaphambili Ukucinga ikakhulu eMelika, ulwazi lwabathengi luyafumaneka kwiimfuno, zilungele ukubonelela ngezimvo kunye neempendulo. I-methinks ibonelela ngezihluzo ukunceda abaphandi bachonge inani ekujoliswe kulo, kubangele iimpendulo ezikhawulezileyo ezivela kwicandelo labagqatswa abafanelekileyo ababelana ngokufumaneka kodliwanondlebe.
Ukusuka kumashishini amatsha okuqala ukuya kumashishini aneminyaka elikhulu ubudala, ukuqonda ukuba abathengi bafuna ntoni kwaye bafuna ntoni kubaluleke kakhulu kwimpumelelo. I-methinks itshintsha ngokukhawuleza amaxesha kunye nolwakhiwo lweendleko zophando. Injongo yethu kukunxibelelana nabathengi ojolise kubo ukuze ubuze imibuzo ebalulekileyo kwaye ufunde. Senze isisombululo esilula, nesichukumisayo kwingxaki enzima kakhulu yokudala iqonga elinamandla, isicelo esisebenziseka ngokulula kunye nendawo yentengiso esebenzayo yeengcinga.
UPhilip Yun, umseki we-methinks kunye neGosa eliyiNtloko leMveliso
Ukufumaneka kwemethinks kunye namaxabiso
i-methinks iyafumaneka ngoku kwaye iqala kwi- $ 89 ngodliwanondlebe. I-methinks ibonelela ngemodeli yokuhlawula njengoko usiya, ke abaphandi banakho ukubambelela okanye ukwandisa njengoko iimfuno zabo zophando zinokutshintsha. Abaphandi banokunikezela ngeeNgcinga zabo kwaye baqhubeke nokunciphisa iindleko zabo ezinxulumene nokuhlawula umrhumo ophantsi weqonga. Abathengi kumashishini amakhulu- okanye abathengi abafuna uphando olusekwe kwiprojekthi-banokucofa kwiseti ye-methink yamandla ophando kubandakanya ukumodareyithwa kobungcali, uhlalutyo kunye nophuhliso lwentetho. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela: imethinks.io
IPhepha leNgcacisonkqubo: Ayilulo lonke uPhando olwenziwe lwalingana
Iqela leemethinks lifuna ukujongana nesihloko sokuqonda kwabathengi kwiminyaka yedijithali, ke senza iphepha elimhlophe Ayilulo lonke uphando olwenziwe lwalingana.
Khuphela ayisiyiyo yonke iPhando eyenziweyo ngokulinganayo
Nceda ukhuphele, ufunde, kwaye undazise ukuba ucinga ntoni. Kwaye ukuba unomdla wokubona i-RaaS isebenza, sonwabile ndikunike umboniso or qala isilingo sasimahla.
tags: ukuqonda kwedijithalizokusetyenziswaUMarc AndreesenUkusetyenziswa kwemvelisoIsisombululo esifanelekileyo somgangatho wophandoUphando olusemgangathwenir & duphando kunye nophuhlisoabacinga